Ukuhlanza Abaqalayo - Yini engingayithunga ekuqaleni futhi ngingaqala kanjani?
Ukuhlanza Abaqalayo | I-DIY eyenziwe ngezandla
Imibono yokuthungela abaqalayo
Uma ususha ukuthunga, udinga imishini eyisisekelo.
Ithuluzi elihle lokuthunga - umsebenzi omuhle
Akukho msebenzi omuhle ongenziwa ngaphandle kwamathuluzi amahle. Lapho ukuthunga, kubaluleke kakhulu ukusebenza ngokucophelela ukuze umphumela wokugcina ubheke ubukeka kahle. Uma kungekho ukusho kwemibono namaphethini, kungaqala ngezinto ezincane nje okwamanje. Noma ubani omusha ukuthunga udinga ukwazi ukuthi yikuphi okumele athenge. Izingubo eziningi zokugcoba nokugcoba zisebenzisa i-cotton enhle. Ochwepheshe bahlukahluka ngokuya kokuqukethwe kanye nokubonakala kwendwangu.
Ithuluzi elifanele labaqalayo lapho bethunga
Indwangu akufanele igcinwe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Amandla ekhanda eliphakeme kakhulu abalulekile hhayi kuphela lapho ethunga, kodwa nangesikhathi esetshenziswa kamuva. Ayikho into ecasulayo kunomshini oqhekeke njalo emshinini wokuthunga. Ngokuphindaphindiwe lokhu kumele kufakwe. Lokhu akugcini nje kuphela isikhathi, kodwa futhi nesifiso sokuthunga selahlekile. Ukuthi ukuthungwa okubizwa ngokuthi ukuthunga akuyona nje kuphela abaqalayo okusemandleni. Lokhu kuvame ukwenziwa nge-polyester futhi ingasetshenziswa kuzo zonke izindwangu. I-Reihgarn ifaneleka kakhulu ukuthutha okwesikhashana. Lokhu kunyembezi ngokushesha futhi kungasuswa kalula uma isetekisi esifanele sisethiwe.
Ngisho nangesisindo, wonke umuntu, hhayi nje labo abasha ukuthunga, kufanele akhethe izinto ezinhle. Isikhali esifanele sokusikeka, esetshenziselwa kuphela ukusika izindwangu, kufaneleke ngokuphelele. Izikhali ezihamba phambili zinezikhala ezinde, zivame ukwenziwa ngensimbi enzima futhi inesikhathi eside sokuphila, uma kungasetshenziswanga kabi. Iphepha noma ezinye izinto akufanele zinqunywe naye - indwangu nje.
Akukho mingcele ekukhethweni kwezindwangu. Konke kuyatholakala. Yonke impahla, yonke imibala - elula futhi enemibala kanye nawo wonke amanani. Uma ukhetha into, akudingeki neze ukhethe imakethe yezobuchwepheshe. E-intanethi kungaba kuhle kakhulu. Ukuze uqale, ngokuvamile kuvame ukuthola ibhokisi lezinhlawulo zendwangu. Ngalokhu, oqalayo angaqala uzame futhi asebenzise. Uma seams okuhle, ungaqaphela iphrojekthi enkulu.
A Schneidematte akudingeki ukuba yingxenye yemishini eyisisekelo, kodwa kusiza kakhulu, ikakhulukazi uma ubukhulu buyikho. Uma usebenza nge-roller blade, akufanele uzinikele ukuze uvikele umhlaba.
kodwa kungaba ebalulekile itheyiphu umthungi sika wokulinganisa, eziningi izikhonkwane esinamakhanda ezahlukene obujwayelekile, ukuthunga izinaliti ngobukhulu obuhlukahlukene ugqinsi, kanye Ripper umthungo, uma ngezinye izikhathi ngeke Ithungelwe ilungelo umphetho noma izingubo Friend too ukuthi kuba ukuba wandisa.
Noma ubani omusha wokuthunga usuvele ehlomele kahle le mishini eyisisekelo futhi angavumela ukuklama kwakhe kugijime.
Noma ubani ongawutholi ukuthunga okuphilayo, kodwa esikhundleni sokuzilibazisa ozinikezelwe emgqeni nasaleni, kaningi akakwazi ukuthunga imibono.
Kufanele kube nokuhlakanipha noma okusebenzayo. Kodwa yini okufanele ugobe? Ithuba elihle lokugqugquzela nokuthunga imibono ukuhamba edolobheni. Ngokuvamile uthola izinto lapho umcabango oza khona "Ngikwazi ukwenza lokho". Uma uphinde uthumele nge-wardrobe yakhe, ngokuvamile uthola izingubo eziye zaphela, kodwa zinhle kakhulu ukuzishiya.
Thola imibono emisha yokuthunga
Isibonelo, i-jeans endala ye-jeans ingabuyekezwa izinto eziningi. Phezulu, ngakho-ke i-waistband ene-zipper namaphakheji angemuva, ingahunyushwa ngokuphelele ibe izikhwama ze-chic.
Imibono yokuthungatha ibuye ibuye ikakhulukazi lapho izithunga.
Imilenze ye-jeans isesimweni esivele isilungele umqulu wezintambo noma amaphakethe amancane. Ngezicelo ezinhle izipho ezenziwe ngothando zingavela. Izikhwama ezincane eziqukethe isigqebhezana - njengomunye wemibono eminingi yokuthunga.
Mhlawumbe kukhona othile ebuhlotsheni noma kumbuthano wabangani abaphatha ngokuthunga. Lezi zikhathi eziningi zinamaphethini amaningi kanye nezinhlawulo eziningi zezindwangu, ezingathuthuka zibe izinto ezisebenzayo. Ngokuba izingane zingadalwa izikhwama zesifuba noma i-chic nama-caps amancane. Amaphethini wokuthunga nawo ayatholakala cishe yonke indawo. Ukuhweba umagazini kunikezela omagazini abazenzele emakethe amashumi eminyaka. Umagazini ngamunye uqukethe iphethini. Isibonelo, uma ufuna ukuthunga i-skirt enhle, bheka iphethini elinjalo futhi uqalise.
Ezitolo zezitolo - okuyinto, okwamanje, eziye zavame kakhulu - zingathengwa izinto eziletha i-Nähideen engaphezulu. Ingxoxo nomthengisi noma umthengisi wezithuthukisi uletha imibono emisha yokuthunga.
Kuthiwani, isibonelo, ngezilwane ezincane ezenziwe nge-terrycloth, okungathathwa ebhajini. Izingane zijabule ngempela futhi imali eningi igcinwe. Mane nje ugcwalise isikhunta bese ubeka endaweni yokushisa ukuze ume ngemva kokugeza.
Imibono enkulu yokuthunga nayo iyatholakala ku-Inthanethi.
Yilawo amabhulogi adalwe asebenzisana nalesi sihloko kuphela.
Imibono yokuthunga ngobuningi. Uma unesithakazelo esihlokweni esithize, uvele ufaka ingxoxo kubhulogi futhi ngokuvamile izivakashi zihlinzeka ngamaphethini athunyelwa ngemizuzu embalwa nge-imeyili.
Ngakho ngokushesha uzofika ukuthunga imibono engeke yenzeke kuwe. Uma ufuna into eyinkimbinkimbi kakhulu, kufanele uhambe kumawebhusayithi ahambisanayo. Lapho uzothola imiyalelo namaphethini isibonelo izembatho zokugqoka noma izigqoko zezinwele nezembatho. Imibono yokuthunga ihlala njalo futhi yonke indawo ingayithola - bheka nje futhi ufunde emcabangweni kanye nobuciko.
I-crochet yabaqalayo | Needlework diy
Ukuhlanza - Ngimaphi amathrekhi engiwasebenzisa?
I-DIY nemisebenzi yezandla
Thelela amakhandlela | DIY
Advent Calendar - Christmas Christmas
Crochet baby amasokisi - DIY
Crochet baby gantshi - DIY